ANNONCE OFFICIELLE DE LA CANDIDATURE D’ELIANA BEZAZA A L’ELECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2018 | PSD MADAGASCAR
ANNONCE OFFICIELLE DE LA CANDIDATURE D’ELIANA BEZAZA A L’ELECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2018
Posted at 29 March 2018 » By : admin8019 » Categories : Politique » Comments Off on ANNONCE OFFICIELLE DE LA CANDIDATURE D’ELIANA BEZAZA A L’ELECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2018
Fanambarana ofisialy ny filtsahan-ko fidian’ny sekretera nasionalin’ny antoko PSD.
Ny 29 Mars 2018 – faritra Analamanga, distrika Sabotsy Namehana no nanaovan’ny sekretera nasionalin’ny antoko PSD ny fisehoana ampahibe-maso niaraka tamin’ireo mpikambana mpiara-dia aminy izay fangatahana nataon’ny ray aman-dreny ao amin’ny distrikan’Avaradrano ny nanolorana azy hirotsaka ho filoham-pirenena. Nandritra ny lanonana dia nifandimby nandray fitenena ireo solo-tenan’ny mpikambana nanotrona, toy ny mpanolo-tsaina politika an’i Eliana BEZAZA, izay nanazava sy nitantara ny zava-nisy tamin’ny fitondran’ny filoham-pirenena Philibert Tsiranana, ny sekretera nasionalin’ny tranoben’ny tantsaha izay nanindry ny lanjan’ny antom-pisian’ny tantsaha eto Madagasikara, ny solotenan’ny tanora, izay namintina ireo olana sedrain’ireo mpianatra ao aorian’ny fianarana mba ahafahana miasa, teo ihany koa ny solotenan’ny vehivavy, nanome lanja ny andraikitry ny vehivavy eo an-tokatrano sy eo anivon’ny fiarahamonina, namarana ny fandraisam-pitenenana ny tao amin’ny Komity MPanoana an’i Bezaza izay ahitana sampam-pikambanana maro, nanantitrantitra ny anton’ny fanohanana an’ I ramatoa Eliana Bezaza sy ny zavatra andrasana avy aminy. Ireo rehetra ireo moa dia samy nangataka ny hirotsahan’ny Eliana Bezaza ho filoha mpirenenan’ny Madagasikara.
Vehivavy mandala ny fihavanana.
Nasongadin’i Eliana Bezaza fa ny fihavanana no tena hery hoan’ny Malagasy, ary anisan’ny lova tsara indrindra napetrak’ireo razantsika teto Madagasikara. Hamerina ny hasin’ny fihavanana eo amin’ny samy Malagasy, izay no tanjona hapetraky ny sekretera nasionalin’ny PSD. Izany no natao dia noho izy efa hita mihariary ny fisaram-bazana ataon’ny antoko politika eto Madagasikara ka miantraika any amin’ny vahoaka.
Tsy latsa-danja amin’izany ihany koa ny politikan’ny kibo izay efa novoizin’I Philibert Tsiranana tao amin’ny repoblika voalohany ka nampivoatra ny Malagasy. Hita nandritra ny fampiarana io politikan’ny kibo io ny firaisan-kina nananan’ny Malagasy tamin’ny fahaiza-mitantana sy mitsinjo ny vody andro merika, izay tsy hita taratra intsony aty ao aoriana.
Nandrisika an’I Eliana Bezaza hirotsaka ho fidiana ny fahitana ny fangirifirin’ny vahoaka amin’ny fitadiavana izay azo arapaka ao anatin’ny iray andro. Nolazainy tao anatin’ny kabariny ny famerenana indray ireo fahafan’ny vaohaka izay nesorina taminy, araky ny foto-kevitra hijoroan’ny antoko PSd “Vahoaka voly, salama, misitraka ny taniny”. Averina amin’ny lanjany ny fahasalamana sy ny tantsaha ary ny fampianarana eto Madagasikara.
Notsindrin’I Eliana Bezaza fa “Adidin’ny eo amin’ny fitondrana no mampiakatra ny vola ao ambany latabatra ho lasa eo ambony latabatra”. Koa noho izany dia tokony fitondrana mangarahara no ho tantanina. Mba ho fitondrana afaka manodina ny vola mandehandeha rehetra ho tombotsoan’ny Malagasy avy fa tsy ho tombotsoan’ny olon-tokana. Anisan’ny mamparofy ny vahoaka ny fahantrana eto an-toerana hany ka miha mitombo ny tsy fandriampahalemana sy ny tsifanjarian-ny toe-piainana eto Madagasikara. Tompon’andraikitra voalohany amin’izay ny fitondrana.
Nitohy tamin’ny fitsofan-drano avy amin’ireo ray aman-dreny ara-drazana eto amin’ny lafi-valon’ny nosy ny lanonana, ary nofaranana tamin’ny lahateny fisaoran’I Ruphine Tsiranana izay Filoha manamboninhitra ny antoko PSD amin’ny fangatahan’ny ry aman-dreny eto Anlamanga sy ny fitsofan-drnao izay natao tamin’ny sekretera nasionalin’ny Antoko. Nanamafy ny tsy fisian’ny antoko PSD roa ary I Eliana Bezaza ihany no natolotry ny antoko PSD hirotsaka ho filoham-pirenena.
← PARTICIPATION AU CARNAVAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU FILONGOABEN NY SAKALAVA
BIENVENU(E) SUR LE SITE OFFICIEL DU PARTI SOCIAL DEMOCRATE DE MADAGASCAR (PSD) →